Markii u horeysay Muqdisho oo lagu qabtay Tartan orod ah iyadoo uu joogo orodyahanka Cabdi Bile Cabdi. – Hornafrik Media Network
Markii u horeysay Muqdisho oo lagu qabtay Tartan orod ah iyadoo uu joogo orodyahanka Cabdi Bile Cabdi.
By HornAfrik	 On Apr 6, 2018
Hornafrik-Tar-tankaan oo ay soo agaasintay Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho, waxaana ka qeyb galay dhalinyaro Orodyahano ah.
Saddex kamid ahaa dhalinyaradii ka qeyb qaadatay tartanka ayaa kala galay Kaalmaha sida 1-aad, 2-aad iyo 3-aad, waxa ayna orodka ka bilaabeen Aargada Axmed Gureey Isgoyska KM4, waxa uuna ku dhamaanayay Daljirka Daahsoon.
Waxaa lagu sharfay in uu goob joog ka ahaado Cabdi Bile Cabdi oo ah Halyeey Soomaaliyeed oo Bilada badan dalka usoo hoyiyay Xiligii Dowladii dhexe ee dalka.
Gudoomiyaha Gobolka ahna Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Injineer Yariisow) ayaa sheegay in Iskaashi dib loogu celin karo Bilicda iyo hormarka Caasimadda dalka.
Arrintaan ayuu ku tilmaamay in ay ka qeyb qaadaneyso Tartanka Muqdisho ay doonayaan in ay la galiyaan Caasimadaha hormaray ee Dalalka kala duwan ee Caalamka.
dhanka kale Khadiijo Maxamed Diiriye Wasiirka Dhlainyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliya ayaa sheegtay in Wasaaradda ay bixin doonto Biladaha dhalinyaradii Kaalmaha hore kala gashay, waxa ayna sheegtay in ay siin doonaan Bilado isugu jira:- Dahab, Qalin iyo Maar oo ay u kala siin doonaan sida ay u kala horeeyaan.
Dhalinyarada kale ee iyanna kasoo muuqday Tar-tanka balse aanan kaalmaha galin waxa ay tilmaamtay Wasiir Khadiija in lasiin doono Shahaado sharaf muujineysa in ay ka mid ahaayeen tar-tamayaasha.
Ugu dambeyn Cabdi Bile Cabdi oo hadlay ayaa Dowladda ka dalbaday in ay xil gaar ah iska saarto sidii dhalinyaradaan ay ugu dhiiragelin laheyd hamigooda iyo in ay taageero siiso si ay u noqdaan Tartamayaal Dalka matala sida uu hadalka u dhigay.
6-da April ayaa loo asteeyay Maalinta Ciyaaraha iyo Nabadda Adduunka, dhanka Soomaaliya waxaa ku lamaanan Maalinta Ciyaartoyda Soomaaliyeed oo sanad waliba munaasabado iyo tartamo loo dhigo.
Qaraxyo goor dhow ka dhacay Muqdisho
Mareykanka oo sheegay inuu dilay 3 Shabaab ah.